Wasaarada waxbarashada dalka oo hanjabaad culus u dirtay shaqsiyaadka ku lugta leh falalka qishka | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Wasaarada waxbarashada dalka oo hanjabaad culus u dirtay shaqsiyaadka ku lugta leh falalka qishka
Abdi kani garane
Iyadoo si habsami leh uu dalka uga socdo imtaxaanka qaran ee sanad dugsiyadeedka 2015-ayaa hadane wasaarada tacliinta sare ee dalka waxaa ay digniin culus u jeedisay shaqsiyaadka ka qeyb qaadanaya gudbinta falalka ku saleysan xadida imtaxaanka guud fasalka afaraad.
Qaar ka mid ah aqoonyahada dalka ayaa dhowaan eedeyn culus u jeediyay wasarada waxbarashada ka dib markii ay daaha ka qaadeen in gabi ahaanba uu faraha ka baxay sanadan imtaxaanka dalka iyadoo ardada ku nool gobolada ay si fudud aalada loo yaqaan whats up ka ay iskaga gudbinayaan imtaxaanka ka hor inta aysan sameyn maadooyinka qaar sida ay xuseen.
Shalay ayey aheyd markii wasiirka waxbarashada dalka uu sheegay in saraakiil ka tirsan wasradiisa ay gacanta ku dhigeen 14-barayaal ah 79-arday iyo laba sarkaal ka tirsan ciidamada police-ka dalka kuwaas oo gabi ahaanba lagu heystay in ay fududeyeen ama qeyb ka ahayeen falalka ku saleysan xadida imtaxanka guud ee dugsiga sare.
Wasiirka ayaa ugu danbeyn sheegay in ay wadi doonaan baacsiga ay sarakiisha wasaradiisa ay ku ugaar sanayan shaqsiyadka ku lugta leh qishka waxaa uuna intaa raaciyay in cidii lagu qabta ay wajihi doonto xukuno kala duwan oo dhanka sharciga dalka.
Degaanada kala duwan oo dalka ka tirsan ayaa horey loogu qabtay shaqsiyaadka kala duwan iyadoo ay ugu badan tahay goobaha lagu xaday imtaxaanka ghuud ee dalka ismaamulada ku yaal gobolka xeebta dalka.